Budata Pilatus PC-7 V2.0 FSX - Rikoooo
Ihe ngosi nke ụgbọ elu dị adị, kobere igwe kwụ ọtọ, ọ bụ ihe magburu onwe ya add-on. Gụnyere ihe ndozi asatọ na ụdị abụọ: Switzerland Air Force, Botswana Defense Force, Alaska State ọhịa (enwere ike ịhapụ tankị), Ndị agha ụgbọelu Austrian, Abu Dhabi Air Force (UAE), US Civil Register (Benpuppy Tribute), Uruguay Air Force, Regba ígwè.
The Pilatus PC-7 Turbo ịzu bụ a ala-nku tandem oche-ọzụzụ ugbo elu, arụpụtara site Pilatus Aircraft nke Switzerland. The ụgbọelu bụ ike nke na niile isi ọzụzụ ọrụ gụnyere aerobatics, ngwá, kenkwucha na abalị diri inyinya. Ọ họpụtara, ihe karịrị iri abụọ ikuku agha dị ka ha ab initio ọzụzụ - ebe ọ bụ na ugbo elu iwebata na 1978 nso 500 ka e rere, ihe ka n'ọnụ ọgụgụ ka na-arụ ọrụ.
Ihe karịrị otu nde awa e bubatara site PC-7s n'ụwa nile.